Burkina Faso inosimbisa chirevo cheAfrican Union pamabasa etsika
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Burkina Faso inosimbisa chirevo cheAfrican Union pamabasa etsika
Dai 18, 2014
ADDIS ABABA, Ethiopia - Chirevo cheAfrican Union Case Study paCultural Services muBurkina Faso chakasimbiswa muna Chivabvu 15 muOuagadougou.
ADDIS ABABA, Ethiopia - Chirevo cheAfrican Union Case Study paCultural Services muBurkina Faso chakasimbiswa muna Chivabvu 15 muOuagadougou. Musangano wekusimbisa wakaitwa pamwe chete neKomisheni uye Ministry of Culture and Tourism yeBurkina Faso. Pakapindwa nevane chekuita nemimhanzi, kutamba, mitambo yemadhirama, nemabhaisikopo, pakati pevamwe vari mubazi rehurumende neakazvimirira pamwe nevanoshandira budiriro. Yakagadzwa neDhipatimendi rekutengeserana neindasitiri yeAfrican Union Commission, chidzidzo ichi chikamu chepurojekiti yekuita ongororo yezvikamu zvebasa muAfrica, uye kusimudzira ruzivo nekunzwisisa kwekutengeserana kwemabasa kuitira kupa hwaro hwekuita. kusimudzira chikamu chebasa uye kusununguka kweramangwana.
Burkina Faso inzvimbo yemimhanzi uye hunyanzvi muAfrica uye inoronga zviitiko zvakati wandei zvetsika izvo zvakagadzira kuzivikanwa kwakakura muAfrica yose nekumhiri. Izvi zvinosanganisira: Mutambo Wepasi Pose weHip Hop Tsika, Mutambo weJazz, Mutambo weMasques et des Arts, Mutambo panafricain de Cinema de Ouagadougou (FESPACO) uye Week Renyika Dzetsika. Nyika iyi yakagadzirawo zvikoro zvematicha, zvekudhirowa nekutamba zvinokwezva vadzidzi vanobva muAfrica yose. Nyaya yebudiriro yeBurkina Faso humbowo hwekuti chikamu chetsika hachifanirwe kurambwa, sezvo chichiunza kudzoka kukuru kuhupfumi nekushandisa vechidiki. Nyaya iyi inoratidzawo kuti mitemo yehurumende ndiyo yakakosha mubudiriro yebazi iri.
Chinangwa chemusangano wekusimbisa chaive chekuunza pamwe chete vane chekuita nezvetsika nemagariro kuti vaongorore zvakawanikwa mugwaro regwaro uye vabatsire mukupedzisa kwerondedzero. Vatori vechikamu vakasimbisa ruzivo, data uye humbowo uye vakawana kubvumirana pane zvakawanikwa mushumo.
Mumashoko ake okuzarura, VaAly Iboura Moussa, Mumiriri weAfrican Union Commission, vakaratidza kutenda kwavo kuHurumende yeBurkina Faso nokuda kwekudyidzana kwakanakisisa uye rutsigiro rusina kudzivirirwa mukuita chidzidzo cheCultural Services muBurkina Faso uye mukuronga musangano wekusimbisa. . Akatenda zvakare basa reEmbassy yeBurkina Faso muAddis Ababa iro rave rakakosha mukubudirira kwechidzidzo. “Indasitiri yeCultural Industry muBurkina Faso yakaonekwa seimwe yezvidzidzo zviri kuitika nekuda kwekubudirira kuri kuita maIndasitiri mukutengesera kunze kwenyika mabasa echivanhu mukondinendi,” vakadaro. Mr. Iboura Moussa akataura kuti kukwanisa kwezvisiri zvechinyakare basa rekutengesa kunze setsika rakaongororwa nedzimwe nyika muzviitiko zvakadai seCarnivals, FESPACO, uye The National Cultural Week yeBurkina Faso, pakati pevamwe. "Indasitiri yetsika kana yekugadzira yakawedzera kuve mupiro mukuru kune dzakasimukira nedziri kusimukira zvakafanana semuenzaniso inopa zvingangoita 3.2 muzana yeUS GDP uye 1.4% yeNigeria GDP uye ndiye mushandirwi wechipiri muNigeria. MuBurkina Faso chikamu chetsika chinopa CFA79, 667,000,000 inova 2.02% kuGDP. Huwandu uhu hunoratidza kuti chikamu ichi hachigone kufuratirwa,” vakasimbisa.
Boeing, Air Canada inopemberera kuburitswa kwekutanga 787 Dreamliner yeCanada
Yepasirose yakanyanya kutsva roller coaster "yabviswa"
Chikamu chitsva chehukama: Mutungamiri weRwanda...
Mvura Leak Detection System yeMasevha Rooms uye Data...
WHO: Monkeypox inopararira inogona kukurumidza muzhizha
Kuongororwa kwedata kunotanga pakudzidza kwepamusoro metastatic ...
Zuva rakawanda nemari shoma: Kupisa kwezuva kwakachipa...
Kuputika kukuru kunoputika nemuSaratoga Hotel mu...
Mambokadzi Elisabeth 2 ikozvino yava Accor Hotel
Tourism muUAE inopenya pasi peMutongi mutsva, Wake...
Kutanga Kubvumirwa Kurapa kweCytopenic Myelofibrosis
Kushanya kweMartinique kunoona mwenje pakupera kwenzira ...
Maitiro ekugadzirisa sei Admission Essay Hacks
Kana Solomon Islands Ichavhurazve Miganho?
Vehicle-To-Grid Market Demand, Scope uye Ramangwana...
Ndiani Minister of Tourism muSaudi Arabia?
Chirevo chitsva chinobatanidza chirwere chepsoriatic uye hutano hwepfungwa